ပီချီချီဆုကို ၈ ကြိမ်သိမ်းပိုက်ပြီး လာလီဂါသမိုင်းမှာ စံချိန်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ မက်ဆီ – Sports A2Z
ပီချီချီဆုကို ၈ ကြိမ်သိမ်းပိုက်ပြီး လာလီဂါသမိုင်းမှာ စံချိန်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ မက်ဆီ
ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးလီယွန်နယ် မက်ဆီဟာ လာလီဂါသမိုင်းမှာ ပီချီချီဆုကို ၈ ကြိမ်မြောက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပြီး တခေတ်မှာတယောက်ဆိုသလို လာလီဂါဂိုးသွင်းအများဆုံးဆုရှင်အဖြစ် ၅ နှစ်ဆက် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားလည်း ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ဒီရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် လာလီဂါ ၃၅ ပွဲကစား၊ ဂိုး ၃၀ သွင်းယူကာ ၉ ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ GOAT ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ဟျူဂို ဆန်းချက်ဇ်နဲ့ ဒီစတီဖာနိုတို့ရဲ့ သူ့ခေတ်သူ့အခါက ၄ နှစ်ဆက် ဂိုးသွင်းအများဆုံးစံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လာလီဂါ နောက်ဆုံး ၅ နှစ်ဆက် ပီချီချီဆုရှင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
ဒီရာသီမှာ ဒုတိယနေရာက ၂၃ ဂိုးသွင်းထားတဲ့ ဘန်ဇီမာနဲ့ ဂျရတ် မိုရီနိုတို့ဟာ အသက် ၃၃ နှစ်သားရဲ့ ဂိုးသွင်းအားကို လိုက်မီနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ငယ်မူငယ်သွေးကြွပြီး ​ခြေစွမ်းပြန်ထိုးတက်လာခဲ့တဲ့ မက်ဆီဟာ သူ့ကစားသမားဘဝတလျှောက် နောက်ဆုံး ၉ ရာသီဆက်တိုက် တရာသီတွင်း စပိန်လိဂ်သွင်းဂိုး ၃၀ ပြည့်မြောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။
တဦးချင်းအကောင်းဆုံးဆုတံဆိပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားလေ့မရှိတဲ့ အာဂျင်တိုင်းသားဟာ လာလီဂါဂန္ထဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ တယ်လ်မို ဇာရာရဲ့ ပီချီချီဆု ၁၀ ကြိမ်ကို လိုက်မီဖို့ နောက်ထပ် ၂ ​ကြိမ်သာ လိုအပ်တော့တာဖြစ်ပြီး လာလီဂါထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် ပါးစပ်ပြောမဟုတ်ဘဲ အချက်အလက်နဲ့ ရပ်တည်ပြနိုင်ဖို့ အတော့်ကို နီးစပ်လာခဲ့တာပါ။
ထာဝရအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပေမယ့် နှိမ့်ချတတ်တဲ့ မက်ဆီကတော့ ရီးရဲလ်ဂန္ထဝင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒို နဇာရီယိုနဲ့ ရော်ဘတ်တို ကားလို့စ်တို့ရဲ့ ဂျာစီတွေကို သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က မတောင်းယူမိခဲ့တာက ကြီးမားတဲ့နောင်တအဖြစ် ရှိနေတယ်လို့ ဝန်ခံသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
မက်ဆီဟာ လာလီဂါထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်ဆုကို ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီကနေ စတင်ဆွတ်ခူးလာခဲ့တာမို့ ၁၁ နှစ်အတွင်းမှာ ၈ ဆုရှင်အဖြစ် အလံထူနိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်သလို ဒါဟာ သူ့ရဲ့လာလီဂါသမိုင်းကို လှလှပပလေး အချောသတ်သွားဖို့ဆိုရင် ဘာစီလိုနာမှာ အနာဂတ်ဆက်ရှိနေမလားဆိုတဲ့အချက်မှာလည်း မူတည်နေတာပါ။
တသက်မှာ ကလပ်တသင်းတည်းမှာသာ ဘဝကို နှစ်မြှုပ်ပြီး နှစ်နှစ်ကာကာကစားလိုတဲ့ မက်ဆီရဲ့ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ ငယ်ဘဝကလပ်ဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ အပြီးသတ် သံယောဇဥ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်း မြင်တွေ့နေရသလို နောက်ရာသီ နူးကမ့်မြေမှာ “မက်ဆီ” ဆိုတဲ့ အမည်နာမကို ပရိသတ်တွေ ဆွေးမြည့်စွာ လွမ်းဆွတ်မနေရဖို့ကလည်း သူ့အပေါ် တောင်းဆိုမှုတွေ ရောက်ရှိနေပါတယ်။
“ဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေ ကျွန်တော့်ကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ကြပုံကို ကျေးဇူးတရားအဖြစ် အမြဲအောက်မေ့ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကလည်း ကျွန်တော့်ကို သိပ်ချစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုပဲ အခက်အခဲတွေ့နေပါစေ…. သူတို့က ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ အမြဲရှိခဲ့တာပါ”လို့ မက်ဆီရဲ့ပြောဆိုမှုတွေက ကာတာလန်အသင်းမှာ ဆက်နေမလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် အရိပ်အမြွက်အဖြေဖြစ်မယ်လို့လည်း ယူဆခံထားရပါတယ်။
ZAWGYI: ဘာစီလိုနာတိုက္စစ္မႉးလီယြန္နယ္ မက္ဆီဟာ လာလီဂါသမိုင္းမွာ ပီခ်ီခ်ီဆုကို ၈ ႀကိမ္ေျမာက္သိမ္းပိုက္ႏိုင္တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ၿပီး တေခတ္မွာတေယာက္ဆိုသလို လာလီဂါဂိုးသြင္းအမ်ားဆုံးဆုရွင္အျဖစ္ ၅ ႏွစ္ဆက္ ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားလည္း ျဖစ္လာခဲ့တယ္။
ဒီရာသီမွာ ဘာစီလိုနာအသင္းအတြက္ လာလီဂါ ၃၅ ပြဲကစား၊ ဂိုး ၃၀ သြင္းယူကာ ၉ ဂိုးဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ GOAT ဟာ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ ဂႏၴဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဟ်ဴဂို ဆန္းခ်က္ဇ္နဲ႔ ဒီစတီဖာႏိုတို႔ရဲ႕ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက ၄ ႏွစ္ဆက္ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆုံးစံခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး လာလီဂါ ေနာက္ဆုံး ၅ ႏွစ္ဆက္ ပီခ်ီခ်ီဆုရွင္ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။
ဒီရာသီမွာ ဒုတိယေနရာက ၂၃ ဂိုးသြင္းထားတဲ့ ဘန္ဇီမာနဲ႔ ဂ်ရတ္ မိုရီႏိုတို႔ဟာ အသက္ ၃၃ ႏွစ္သားရဲ႕ ဂိုးသြင္းအားကို လိုက္မီႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ငယ္မူငယ္ေသြးႂကြၿပီး ​ေျခစြမ္းျပန္ထိုးတက္လာခဲ့တဲ့ မက္ဆီဟာ သူ႔ကစားသမားဘဝတေလွ်ာက္ ေနာက္ဆုံး ၉ ရာသီဆက္တိုက္ တရာသီတြင္း စပိန္လိဂ္သြင္းဂိုး ၃၀ ျပည့္ေျမာက္လာခဲ့တာလည္းျဖစ္တယ္။
တဦးခ်င္းအေကာင္းဆုံးဆုတံဆိပ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားေလ့မရွိတဲ့ အာဂ်င္တိုင္းသားဟာ လာလီဂါဂႏၴဝင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ တယ္လ္မို ဇာရာရဲ႕ ပီခ်ီခ်ီဆု ၁၀ ႀကိမ္ကို လိုက္မီဖို႔ ေနာက္ထပ္ ၂ ​ႀကိမ္သာ လိုအပ္ေတာ့တာျဖစ္ၿပီး လာလီဂါထာဝရအေကာင္းဆုံးကစားသမားအျဖစ္ ပါးစပ္ေျပာမဟုတ္ဘဲ အခ်က္အလက္နဲ႔ ရပ္တည္ျပႏိုင္ဖို႔ အေတာ့္ကို နီးစပ္လာခဲ့တာပါ။
ထာဝရအေကာင္းဆုံးေဘာလုံးသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေပမယ့္ ႏွိမ့္ခ်တတ္တဲ့ မက္ဆီကေတာ့ ရီးရဲလ္ဂႏၴဝင္ေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရာ္နယ္လ္ဒို နဇာရီယိုနဲ႔ ေရာ္ဘတ္တို ကားလို႔စ္တို႔ရဲ႕ ဂ်ာစီေတြကို သူ႔ရဲ႕ကစားသမားဘဝ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္က မေတာင္းယူမိခဲ့တာက ႀကီးမားတဲ့ေနာင္တအျဖစ္ ရွိေနတယ္လို႔ ဝန္ခံသြားခဲ့ပါေသးတယ္။
မက္ဆီဟာ လာလီဂါထိပ္တန္းဂိုးသြင္းရွင္ဆုကို ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီကေန စတင္ဆြတ္ခူးလာခဲ့တာမို႔ ၁၁ ႏွစ္အတြင္းမွာ ၈ ဆုရွင္အျဖစ္ အလံထူႏိုင္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္သလို ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕လာလီဂါသမိုင္းကို လွလွပပေလး အေခ်ာသတ္သြားဖို႔ဆိုရင္ ဘာစီလိုနာမွာ အနာဂတ္ဆက္ရွိေနမလားဆိုတဲ့အခ်က္မွာလည္း မူတည္ေနတာပါ။
တသက္မွာ ကလပ္တသင္းတည္းမွာသာ ဘဝကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ကာကာကစားလိုတဲ့ မက္ဆီရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ ငယ္ဘဝကလပ္ျဖစ္တဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ႔ အၿပီးသတ္ သံေယာဇဥ္ျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရသလို ေနာက္ရာသီ ႏူးကမ့္ေျမမွာ “မက္ဆီ” ဆိုတဲ့ အမည္နာမကို ပရိသတ္ေတြ ေဆြးျမည့္စြာ လြမ္းဆြတ္မေနရဖို႔ကလည္း သူ႔အေပၚ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။
“ဘာစီလိုနာပရိသတ္ေတြ ကြၽန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲ့ၾကပုံကို ေက်းဇူးတရားအျဖစ္ အၿမဲေအာက္ေမ့ပါတယ္။ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကို သိပ္ခ်စ္ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုပဲ အခက္အခဲေတြ႕ေနပါေစ…. သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ အၿမဲရွိခဲ့တာပါ”လို႔ မက္ဆီရဲ႕ေျပာဆိုမႈေတြက ကာတာလန္အသင္းမွာ ဆက္ေနမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြအတြက္ အရိပ္အႁမြက္အေျဖျဖစ္မယ္လို႔လည္း ယူဆခံထားရပါတယ္။
ဗီလာရီးရဲလ်ရဲ့ သမိုင်းသစ်အတွက် နောက်ဆုံးအထိ ဇာတ်ပို့ပေးပြီး ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ ယူနိုက်တက်
FWA ဆုအပြီး PFA ဆုအတွက် မန်စီးတီးနဲ့အပြိုင် ဘယ်ကစားသမားတွေ စိန်ခေါ်နိုင်မလဲ
နှစ်ဂိုးသွင်းပြီးမှ နိုင်ပွဲကို လက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့...
ဒက်ကလန်ရိုက်စ်ရဲ့ တောက်ပမှုနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်...
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ကျောနံပါတ် ၁၀ ပိုင်ရှင်...